AQRISO : XOG KUSAABSAN DAGAALKA SADEX GESOODKA U DHAXEYA MAN UNITED ,MAN CITY IYO LIVERPOOL | Goolasha
You are at:Home»England Premier league»AQRISO : XOG KUSAABSAN DAGAALKA SADEX GESOODKA U DHAXEYA MAN UNITED ,MAN CITY IYO LIVERPOOL
By Goolasha on	 April 24, 2019 England Premier league, FALANQEYNTA, Wararka Maanta
Weeraryahanka u dhashay Belgium ee afka hore uga ciyaara United, waxa si weyn loogu dhalleeceeyey qaab ciyaareedkii uu muujiyey kulankii Sabtidii ay kooxdiisii hore ee Everton 4-0 ku xasuuqday Man United oo joogtay Goodison Park Axaddii, waxaana si gaar ah isaga loogu tilmaamay inuu lumiyey ‘aqoonsigii United’, balse waxa uu mar kale safka hoggaamin doonaa ciyaarta Manchester City.
Arbacada, waxa uu ka hor tegi doonaa City, waxaanay dagaal fool ka fool ah iskaga hor iman doonaan difaaca reer France ee Aymeric Laporte oo wax walba u samayn doona sidii uu u joojin lahaa, ugana ilaalin lahaa inuu gaadho shabaqiisa amaba uu khatar geliyo.
Ka hor ciyaarta, waxa Laporte uu ku naaloonayaa qiimaynta wanaagsan ee uu ku helay Kulankii Tottenham ee Sabtidii oo uu si fiican u xakameeyey Heung Min Son, waxaanu mar kale isku dayi doonaa inuu bandhiggaas ku celiiyo.
Romelu Lukaku waxa uu eedayn badan la soo kulmayay sanado badan iyada oo lagu duray in aanu waxba ka samayn karin kulamada kooxaha waa wayn waxaana xidiga reer Belgium soo saarnaa culays wayn kulamadii ugu danbeeyay ee ay Man United soo dhibtoonaysay.
Laakiin Lukaku ayaa haddii uu habeenkiisa fiican ku jiro waxa uu samayn karaa farqi muhiim ah isaga oo marar badan xili ciyaareedkan awood soo muujiyay.
Qaab ciyaareedka uu Lukaku kala soo muuqdo Old Trafford iyo waliba dhamaystirka uu sameeyo fursadaha uu helo ayaa natiijada ciyaarta wax wayn ka noqon karta.
Victor Lindelof vs Sergio Aguero
Weeraryahanka reer Argentine ee hoggaamiya Manchester City, waa ciyaartoyga hoggaaminaya gool-dhalinta Premier League oo uu illaa hadda ka dhaliyey 19 gool, laakiin waxa uu rajaynayaa inuu ku maadsado cadowgiisa Manchester United oo uu kusii dheeraysto tirada goolashiisa.
Aguero waxa uu khatar yahay marka ay kubaddu lugtiisa ku jirto, markaas oo uu awood u leeyahay inuu si sahlan kubadda u gaadhsiiyo shabaqa laga ilaalinayo, laakiin markan waxay si toos ah iskaga hor imanayaan difaaca reer Sweden ee Victor Lindelof oo inkasta oo uu ku jiro laacibiinta la dhalliilayo haddana aan looga maarmi karin ciyaartan.
Lindelof bandhig fiican ayuu muujiyey marka si guud loo eego xili ciyaareedkan, waxaana uu nafta u huri doonaa sidii uu goolkiisa uga ilaalin lahaa Man City isagoo kaashanaya saaxiibbadiisa uu tababare Solskjaer usoo xulo inay garbihiisa ahaadaan.
Sergio Aguero waxa uu kulamadii ugu danbeeyay soo ahaa mid aan lahayn waxtarkii waynaa ee uu xili ciyaareedkan soo sameeyay halka Victor Lindelof uu isna ku soo dhibtoonayay difaaca kooxdiisa United laakiin kulanka Manchester Derby ma aha mid lagu qiimeeyo kulamadii hore balse waa mid ka duwan xaalad kasta.
Qaabka ay Victor Lindelof iyo difaaca kale ee kooxdiisa Man United ay u joojiyaan Sergio Aguero iyo xidigaha kale ee weerarka ayaa saamayn wayn ku yeelan karta kulanka Old Trafford ee Premier league.